Iindaba - Esona sikhululo sikhulu samandla ombane esakhiwayo-idama lesikhululo samanzi iBaihetan siza kufikelela encotsheni.
Esona sikhululo sikhulu samandla ombane esakhiwayo-idama lesikhululo samanzi iBaihetan siza kufikelela encotsheni.
Esona sikhululo sikhulu samandla ombane sisakhiwa - idama lesikhululo samanzi iBaihetan selizakufikelela encotsheni. Akubangakho bhekane kubushushu okoko kwaqala ukugalelwa kwe-8 yezigidi ze-m³!
Esona sitishi sikhulu sakhiwa phantsi kwesona sixhobo siphantsi sokwakha kunye nesona sinzima kakhulu- yiBaihetan Hydropower Station. I-Sprint phezulu kumgca wonke!
Inkqubo yokwakhiwa kwedama yeSitishi se-Baihetan Hydropower iseta iirekhodi ezininzi:
Iiparitha zenyikima yedama leemitha ezingama-300 eziphakamileyo-No. 1 emhlabeni
Ngethuba lokuqala emhlabeni, kusetyenziswa ikhonkrithi yesamente eneshushu esincinci kwidama lonke ledama le-arch eliphakamileyo leemitha ezingama-300. Idama lijamelana ngokupheleleyo nomthamo wamanzi wezigidi ezili-16.5 zeetoni - inombolo yesi-2 emhlabeni
I-Arch dam iphakame kangangeemitha ezingama-289- ngu-3 emhlabeni
Idama sisiseko esingundoqo seprojekthi yesikhululo samandla ombane, esenza umsebenzi obalulekileyo wokugcina amanzi kunye nokukhulula izikhukula. Idama lesikhululo samanzi iBaihetan Isikhululo samandla ombane sineemitha ezingama-300 zomgangatho wekhonkrithi ophakamileyo ojikeleze kabini. Ukuphakama okuphezulu kwedama ziimitha ezingama-289, ubude be-arc ye-crest yedama ziimitha ezingama-709. Umzimba wedama uhlelwe ngemingxunya ephantsi ye-6 yokuphambukisa, i-7 yezikhukula ikhupha imingxunya enzulu kunye ne-6 yezikhukula zokukhupha imitha yemitha, ulwakhiwo oluntsonkothileyo.
Ngokwedatha evela kwiziko iJinsha River Hydrometeorological Center, 2020 Baihetan Hydropower Station Area Area, 251 days of windy wind above level 7, 70.5% of the whole year. Imo yezulu kwindawo yesikhululo samandla ombane weBaihetan izisa imiceli mngeni emininzi ekugaleleni ikhonkrithi edamini.
Ukongeza kwimozulu, idama lesikhululo samandla ombane iBaihetan laloyiswa ngeengxaki zobuchwephesha kwihlabathi liphela. Inombolo 1 kwihlabathi kwiiparitha zenyikima yedama le-arch yekhonkrithi ene-ultra-high, igcwalisa iimeko ezintsonkothileyo, uninzi lwezikhewu zobugcisa kulwakhiwo lwamadama e-arch ephezulu.
Ukusetyenziswa kwesamente yesamente enobushushu obuphantsi kwidama liphela ledama le-arch eliphezulu leemitha ezingama-300, ukusetyenziswa kwetekhnoloji yoyilo kwinqanaba lokuqala lokungcwaba ngokuthe ngqo ukwakhiwa kwesango, kunye nokusebenza okukhuselekileyo nokufanelekileyo Iinqwelo ezisixhenxe zeentambo zekhebula ezimbini zezokuqala kwimizi-mveliso. Ulawulo lweenkcukacha zokwakha lusekiwe. Iqonga, ukuze kuqondwe ulawulo olululo kunye nokulawulwa kwawo wonke umjikelo wolwakhiwo nokusebenza, kwaye idama lesikhululo samanzi iBaihetan liye laba lelona dama "likrelekrele" embalini.
Kuxelwe ukuba ukugalelwa kwekhonkrithi komzimba ophambili weBaihetan Dam, umthamo opheleleyo ufikelela kwi-8 yezigidi zeekyuby metres, yahlulwe yangamacandelo eedama angama-31. Akuzange kubekho bhuma bushushu okoko kwagalelwa ukugalelwa. Zonke izikhombisi ziyafezekiswa "ngokugqibeleleyo kwiprojekthi" esemgangathweni ecetywayo liQela leeGorge ezintathu.
Kwi-2019, idama lakhupha i-25.7 yeemitha zekhonkrithi ende engundoqo, isiseko sekhonkrithi sigudile kwaye sixinene, umndilili usasazwa ngokulinganayo kwaye unamaqamza omoya amancinci, angenise umgangatho okwakhiwa kwekhonkrithi ophezulu "umbhalo".
Ukuqala kuka-2021, eli limitha leemitha ezingama-300 lekhonkrithi eliphakamileyo eliphindwe kabini, i-Sprint ukuya phezulu. Kulindeleke ukuba idama ligalelwe phezulu ngoMeyi kulo nyaka, yeyona projekthi inkulu yamandla ombane esakhiwa ehlabathini. “Nge-1 kaJulayi bat ibhetshi yokuqala yeeyunithi ezivelisa imveliso zibekwe kwimveliso ukuze zibeke isiseko esiqinileyo.